4 inji tubada musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW 4 Inch Centerset Qasabada Musqusha Kali-Qabashada Ah Ee Chrome
WOWOW 4 Qolka Qolka Qolka Musqusha Kaliya ee Gacanta Qalliinka kujira gudaha Chrome dhexdeeda
FUDUD in lagu rakibo iyada oo leh 3 dalool 4 inch CenterTubooyinka musqusha ee gacanta kaliya waxay ku habboon yihiin rakibaadda heerka 4-inch. Tuubada caadiga ah waxay la timaaddaa ul wiishka iyo istaagga soo booda;
Tubada musqusha hal: daawaha Zinc / birta aan lahayn; Dusha sare: Qurxinta iyo dhamaystirka chrome ayaa ku habboon qurxinta musqushaada.
QAABKA BAHTROOM EE CENTERSET WAA FUDUD IN LAGU MAAMULO BIYAHA: Degdeg ah, qalab rakibida qasabada musqulaha, 1.2 inch ugu badnaan qoto dheer. Tuubada musqusha ee gacanta kaliya, gacanku aad buu u fudud yahay in gadaal-iyo-hor-iyo-hoos loogu dhaqaaqo. mugga iyo heerkulka biyaha.
BUUGGA BASIINKA OO KACAYN SOO SAAR: chrome tubada musqusha waxa ay la socotaa isku xidhka bulaacada birta. Biyaha ayaa ka soo baxa tuubada tuubada adigoo riixaya usha wiishka, adigoo iska ilaalinaya inay xoqaan gacmahaaga dhaqday. Khadadka sahayda ayaa si gooni ah loo iibiyaa
CHROME FAUCET DENG: chrome basin tuubada waxay leedahay fashion classic retro design. Tubada musqusha ee sagxadda leh waxay ku habboon tahay guri kiro ah, guri cusub, guri dabaq ah, guri mooto ah, trailer safarka iyo isticmaalka qoyska.
2320700C tilmaamaha rakibaadda
Qubeyska musqusha Chrome 2320700C
Qubayska musqusha ee maydhashada chrome ee WOWOW ayaa musqushaada u muuqda muuqaal qurux badan. Qubayska qubayska musqusha ee chrome wuxuu leeyahay naqshad naqshadeyn retro classic ah. Waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa sumcadda qolkaaga musqusha, guri kasta oo aad ku nooshahay. Qubayska musqusha ee chrom-ga waxaa lagu rakibi karaa guri kiro ah, guri cusub, aqal keliya, aqal matoor, baagaga safarka, trailer safka, ama guri. Qolka qubeyska musqusha ee kuxiran chrom-ka wuxuu kuyaalayahay muraayad u eg chrome-muraayad u eg oo iftiin siisa musqusha kasta. Dhamaadka chrom waa mid si qoto dheer u milicsanaya si uu kuu siiyo muuqaal dhaldhalaalaya oo si fiican isugu dhafan qaab kasta oo musqusha ah. Iyada oo wareegyadeeda qulqulaya ay kudartay musqushaada mid caadi ah oo hadana casri ah.
Qolka fadhiga musqusha ee loo yaqaan 'chrome musqulo chrome' wuxuu bixiyaa hab sahlan oo wareejinta gacmaha gadaal iyo gadaal iyo kor looga qaado. Sidan ayaad hal gacan ku xakamayn kartaa mugga biyaha iyo heerkulka. Waxay fududeyneysaa in si yar loogu hagaajiyo socodka biyaha si sax ah iyadoo loo eegayo baahiyahaaga gaarka ah. Waxaad la yaaban doontaa fududeynta socodka biyaha la xakamayn karo.
Qolka qubeyska musqusha chrome qalab tayo sare leh
Qubeyska musqusha chrome ee WOWOW waxaa laga soo saaray aluminium zinc ah, waxaana lagu dhammeystirey gacmo-gashi barakeysan oo la rinjiyeeyay. WOWOW waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda casriga-teknoolojiyadda si loo dammaanad qaado quruxda aan waqtiga lahayn iyo cimriga waarta. Fallaaraha alwaaxa sida tusaale ahaan waxay bixiyaan wax dhib yar oo dhibic ah si loo rogo. Kartoonnada tayada sare leh ee alwaax dhogorta leh ayaa dhanka kale maray tijaabo ay la socdaan in ka badan 500,000 wareeg oo biyo ah. Hadana wali tubbada musqusha ee chrome waxay sifiican u qabanayeen ka dib dhammaan baaritaanadaas oo dhan. WOWOW ayaa ka dhalisay dhammaan heerarka warshadaha muddada dheer marka loo eego cimri dhererka.
Kariim ahaanta ka sokow, waxaa kale oo wanaagsan in la ogaado inaad haysato biyo nadiif ah oo nadiif ah wakhti kasta. Maaddada macdanta badan ee loo adeegsado, waxaad wakhti kasta la kulmi doontaa biyo bilaash ah. Tani waxay ilaalin doontaa caafimaadka adiga iyo qoyskaagaba weligaaba. Casriyeynta tubada musqusha chrome ee WOWOW markaa ma aha oo kaliya muuqaal cajiib ah musqushaada, waxay sidoo kale noqon doontaa xulasho caafimaad leh!
Qubayska qubayska qubayska ee chj
Qubayska qolka musqusha ee chromet chloret chloret waxaa si fudud laguugu rakibi karaa naftaada. Qashin-qubka tuubbada musqusha ee chrom-ga ayaa diyaar u ah 4 inji 3-dalool-god oo lagu rakibayo. Masaafada u dhaxaysa qasabada iyo gacanta ayaa ah 4 inji. Iyada oo ay la socdaan dhammaan qalabyada iyo qaybaha kullanka tubooyinka musqusha ee chrom waxay u diyaar u yihiin rakibidda is-qaban-qaabinta. Qalabka-DIY-rakibida ayaa kuu badbaadin doona kharashyo dheeraad ah oo tuubbo-qaali qaali ah. Mana aha muhiim in gabi ahaanba. Naqshaddeeda hal-abuurka leh waxay suurtagal u tahay talo-bixin si loogu rakibo tubbada musqusha chrome 20 daqiiqo gudahood. Qalabka rakibaadda xitaa wuxuu la yimaadaa galoofisyo dhammaystir ah. Sidan ayaad u dhaawici doonin gacmahaaga si shil ah markaad ku rakibido tubada musqusha chrom. Fadlan la soco in khadadka sahayda aan lagu darin haddii aad u baahatid, oo si gooni gooni ah ayaa loogu iibiyaa.
Dhererka xajmiga ah ee tubbada musqusha ee WOWOW waa 2.7 inji halka gaaritaanka tuuguna yahay 4.2 inji. Qolka musqulaha qolka keliya ayaa ku habboon rakibidda 4-inji ah. Ka sokow, tubada qubayska qolka musqusha ee chrome waxay la timid gool-haye kor u kaca ah oo ay ku jiraan usha kor u qaadida isku dhafan. Qolka qubeyska ee chrome musqusha wuxuu si wanaagsan isugu daraa iskoolka chrom bullaacadda. Waxay sameyneysaa midnimo mideysan oo musqushaada musqusha ah. Waxaad si sahlan ugu oggolaan kartaa in biyuhu ka dhammaadaan musqusha qubayska adiga oo hoos u riixa usha wiishka. Fududeynta taabashada usha wiishka, waxay kaa ilaalisaa inaad dhaawacdo gacmahaaga markaad dhaqeyso. Naqshadeynta jiidda ayaa loo qaabeeyey inay noloshaada ka dhigto mid aad nadiif u ah oo ku habboon.
Qubayska musqusha chrome
Soosaarayaasha hal-abuurka leh ee ABS waxay keydiyaan wax ka badan 50% biyo. Waxay maamushaa durdurinta biyaha iyadoo siineysa cadaadis dhanka biyaha ah. Tani waxay kuu horseedaysaa durdur biyo ka-hortaga, oo si aad ah kuugu keydin doona biilkaaga biyaha. Waxay kuxirantahay meesha aad joogto, biilka biyahaaga si fudud ayuu iskugu dari karaa. Sidaa darteed way fiicantahay in la ogaado inaad badbaadin karto kharashaadka biyaha, adoo aan xitaa lumin waxqabadka. Adigu dhib kuma dareemi doontid faraq maaddaama waayo-aragnimadaada biyaha ay xitaa sii fiicnaan doonto sababtoo ah astaamaha lidka-firidhsan.
Soosaarayaasha sare ee waxqabadka sare ee Neoperl ayaa ku siinaya waayo-aragnimo dhaqitaan raaxo leh. Adigoo taabasho jilicsan taabanaya farahaaga, waxaad si fudud uga saari kartaa wixii haraaga adag ee biyaha harta sida kaalshiyamka. Sidan ayaad u haysan kartaa tubbada musqusha chrome sidii wax cusub oo si fiican u shaqeynaya. Qalabka korantada ee tubbada musqusha chrome sidoo kale si fudud ayaa gacmahaaga looga saari karaa. Xitaa uma baahnid qalab kasta oo aad ka saarto ayer-ka maadama aad si fudud uga bixi karto astaantan hal-abuurka leh. Waad ka saarikartaa ayerka si aad u nadiifiso ama u beddesho.
Qubayska musqusha chrome oo aan khatarta lahayn
Iyada oo muddadeeda dammaanad-qaadashada ah ee 3-da sano ah, WOWOW waxay muujineysaa kalsoonida ay ku qabto qasabadda musqusha ee chrome. Qalabkan musqusha ee tayada sare leh ee chrome waxaad ku leedahay qiimaha ugu fiican lacag aad ka heli karto suuqa. Qalabka tayada sare leh lama tartami karo, xagga lacagta la maal galiyayna qiimaha waa u hooseeya inta la heli karo. Sidaa awgeed, WOWOW waxay dammaanad ka tahay inaadan ka heli doonin qasabad musqusha ka tayo wanaagsan isla qiimahaas. Midkoodna ma heli doontid noocan ah qasabadda musqusha tayada leh qiimo ka jaban. Sababtoo ah tayada sare, WOWOW kama baqeyso inay ku siiso muddo 3-sano oo dammaanad ah. Qasabadda musqushaada chrome waxaa isla markiiba lagu beddeli doonaa mid cusub haddii ay waxyeello u geysato sababo jira awgood.
Waxaad ka iibsan kartaa tubada musqusha ee 'WOWOW' qolka musqusha wax khatar ah haba yaraatee. Waxaad heleysaa dammaanad lacag celin ah oo 90 maalmood ah. Haddii aadan dhicin inaad 100% ku qanacsan tahay qasabadda cusub ee musqusha ee WOWOW, waxaad heli doontaa lacag celin buuxda. Iyadoo aan su'aalo la weydiin, sida oo kale. Laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa inaadan soo celin doonin qasabadaada, maadaama aan haysanno macaamiil badan oo qanacsan oo aan ka soo celinayno adduunka oo idil. Waxaan hubnaa inaad ku qanci doonto qiimaha lacagta aan kuu soo bandhigeyno.
Faa'iidooyinka tubbada musqusha ee chrom marka loo eego:
• Naqshadeynta chrome dhalaalaya
• Si qunyar socod ah u shaqeynaya
• Iyada oo la joojinayo goolhayaha jiirka cusub ee jiqda
• Waxay ka samaysan yihiin qalab macdanta zinc ah oo tayo sare leh
SKU: 2320700C Categories: Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya, Qubeyska Musqusha Tags: 4 inch, Hal gacan
Waxaa Joojiyay Soo-saare
Daawaha Zinc / Brass / steel ahama
3 dalool 4 injineer naqshad xarig
NSF waalka dhoobada dhoobada, biyaha isku qasan, 3-god 4 gudaha naqshadaha xarunta, si sahlan loo rakibo, 1 xakamaynta biyaha kulul iyo kuwa qabow, chrome
WOWOW Musqusha Qubeyska keligiis ah ee saliidda qashinka ...
WOWOW Qolka Qolka Musqusha ee Feyteetarka Chrome
La iibiyey: 66